राष्ट्रपतिमाथि ‘प्राङ्क’ ! कानुनविद भन्छन्– मुद्दा चलाउन मिल्छ | Ratopati
राष्ट्रपतिमाथि ‘प्राङ्क’ ! कानुनविद भन्छन्– मुद्दा चलाउन मिल्छ
सेप्टेम्बर ७ को बिहानै युट्युबमा एउटा भिडियो अपलोड भयो । ८ मिनेट ३७ सेकेण्डको भिडियोमा समीर नाम गरेका एक किशोरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्राङ्क गरेको दाबी गरेका छन् । उक्त भिडियोको सुरुवातमै किशोरले भिडियोलाई रमाइलोका रुपमा मात्रै लिनुहोला भनेका छन् ।
तर, प्राङ्क भनिएको भिडियो रमाइलोमा मात्रै सीमित छैन । किशोरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अश्लील मजाक गरिएको छ ।
८ मिनेट ३७ सेकेण्डको भिडियोमा विद्यादेवी भण्डारी भन्दै महिलाको जस्तो सुनिने आवाजमा प्राङ्क गरिएको छ । १ मिनेटबाट राष्ट्रपतिलाई फोन गरिएको जस्तो देखाइन्छ । सुरुमा फोन गएको रिङ ब्याक टोन बजाइन्छ र १ मिनेट २९ सेकेण्डमा उताको फोन उठेको देखिन्छ । त्यसपछि सुरुमै किशोरले विद्यादेवी भण्डारी बोलिराख्नु भा’छ भन्दै प्रश्न गर्छन् । यता, विद्यादेवी भण्डारी नै बालिराछु भन्नुहोस् भन्दै उत्तर आउँछ ।
अनि किशोरले आफू पोखराबाट पत्रकार बोलेको भन्दै सुनाउँछन् । महिलाको जस्तो सुनिने आवाजमा पोखराबाट पत्रकार बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्छ । अनि किशोरले आफू पोखराबाट पत्रकार नै बोलेको जवाफ दिन्छन् । त्यसपछि किशोरले सुरुमै महङ्गो गलैँचा र २५ करोडको कारको कुरा के हो भनेर सोध्छन् ।
तर, किशोरले फेरि प्रश्न गर्छन्, ‘बिर्सिदिउँ भन्दा पनि तपाईँ र ....बीच गाढै सम्बन्ध छ भन्ने कुरा आइराथ्यो, त्यही भएर’ ... । त्यसपछि उताबाट जवाफ आउँछ, ‘उहाँलाई म सम्मान गर्छु, उहाँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे । उहाँलाई म दाइजस्तो मान्छु भनेर प्रतिक्रिया आउँछ । त्यसपछि फेरि किशोरले सोध्छन् कि के तपाई दाइ सोच्नुहुन्छ भनेपछि ...?
उताबाट फेरि दाइ नै सोच्छु भनेर उत्तर आउँछ । त्यसपछि किशोरले अर्को प्रश्न गर्छन् कि तपाईले दाइ भन्दाखेरि केपी ओली जी लाई हर्ट होला नि ? त्यसपछि उताबाट जवाफ आउँछ, ‘कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पत्रकार साथी भएर ?’ फेरि किशोरले तपाइँले दाइ भन्दा केपी ओलीजीलाई मन दुख्न सक्छ भनेर ...’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
यो त भयो भिडियोको कुरा । अब प्रश्नचाहिँ प्राङ्क कोसँग कसरी गर्न पाउने, राष्ट्रपति मजाकको पात्र हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा कुरा गरौं ।
सरकारले मुद्दा चलाउन मिल्छ : अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई
हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड आयोजना हुने
निशुले जितिन् 'मिस ग्राण्ड नेपाल' ताज